I-Els Orgues de Benitandús - Alcudia de Veo - Sierra Espadán - I-Airbnb
I-Els Orgues de Benitandús - Alcudia de Veo - Sierra Espadán
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAida
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAida iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
, uEls Orgues de Benitandús, unegumbi elinebhedi elala abantu ababini (180*200), igumbi elineebhedi ezimbini (90 * 200), igumbi lokuhlambela (elinomatshini wokomisa iinwele ne-shower gel), igumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi (180 * 200) nekhitshi. Yonke le nto kunye namashiti, iingubo, ii-quilts kunye neetawuli. Ikhothi kunye nabakhuseli kwisicelo.
Ikhitshi line-cob ye-ceramic, ioveni, i-microwave, ifriji, i-toaster kunye ne-ayini, kunye nazo zonke izinto ezifunekayo ekhayeni. Sinomatshini wokuhlamba impahla.
Ithivi, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye NEWIFI...
I-Benitandús yindawo ekhethekileyo, apho ndachitha khona usana lwam, ubutsha bam kunye nexesha lam elihle. Yilali encinci ejikelezwe yindawo entle yeSierra Espadán. Yindawo efanelekileyo yokufumana ibhalansi yangaphakathi esiyidingayo.
Siyikhethile le ndlu ngenxa yendawo ekuyo kunye nemfudumalo yayo, kwaye siyilungisile phakathi kwabazali bam kunye nam. Siwaphucule amagumbi, apeyintiweyo saza sahombisa zonke iikona zawo. Ibingumsebenzi onzima, kodwa ibiwufanele. Le ndlu yayikade iyi-Benitandús inn, nangona yayineminyaka emininzi edlulileyo... Kwaye, nangona iindonga zayo zenziwe ngamatye, le ndlu yakudala iyitshintsha kancinci.
Zonke zikumgangatho omnye. Kukho ikhitshi, igumbi lokuhlambela, isofa ekwayibhedi namagumbi okulala amabini. Into ekhethekileyo kukuba kwigumbi lokuhlala linepiyano, apho kuza kubakho ubusika ngokuhlwa emlilweni. Ukongezelela, kulo nyaka uphelileyo siye senza igadi yabucala yeendwendwe, apho zinokonwabela indawo yokuphumla ecaleni kwendawo yokoja igesi. Indawo efanelekileyo yokonwabela indalo kunye noxolo lwendawo.
Sisekuqaleni kwendawo egciniweyo, eqokelela amanzi eSierra Espadán ngendledlana enqumla kwidolophu. I-Els Orgues de Benitandús, intaba ephumelela eBenitandús, yindawo yokubhekisela kunye nokuziqhenya kwabantu bayo. Iyohlula iBenitandús neSueras kunye neAlcudia neVeo. Igama layo livela ekumeni kwamatye ayo, afana nemibhobho yento yomculo. Yenziwe ngezityalo eziluhlaza, ezitshintshayo kuxhomekeka kwithambeka okhoyo. Ukufikelela kumphezulu wayo ngumzamo omncinci, ovuzwa ngaphezu kobuhle beembono zayo kunye nevumba elivela kwizityalo zayo.
Ukuba unyuka intaba, ukongezelela ekufumaneni le ntaba intle, ungafumana iindawo ezingakhange zichukumiswe yimpucuko, iintsalela zemfazwe yasekuhlaleni, imithombo, imiqolomba, iindawo zokuhlala... Ukuba uthatha isigqibo sokuphuma kwihlabathi, ndibuze, ndiyazazi ezona ndawo zifanelekileyo.
Ukuba ukhetha ukwenza izinto ezininzi, kule ndawo kukho izinto ezahlukahlukeneyo ezifana: ukunyuka intaba, i-ferrata, ukuloba, ukuhamba ngephenyane, ukusefa emanzini, isangqa somhlaba sabantwana kunye nokunyuka intaba, iindlela zosapho kunye neendlela zeengcali: "Indawo apho unokulahleka khona".
*Iindwendwe zingasebenzisa iindawo zedolophu, njengepuli yokuqubha, ibala lokudlala, indawo yokupaka...
Ukuba unyuka intaba ungafumana iindawo ezingenabungozi, iintsalela zemfazwe yasekuhlaleni, imiqolomba yeendawo zokuhlala. Ukuba uthatha isigqibo sokuphuma kwihlabathi, ndibuze, ndiyazazi ezona ndawo zintle.
Iindwendwe zinendlu yonke, ngaphandle kokwabelana nam okanye ezinye iindwendwe.
Inombolo yomthetho: VT-34591-CS
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alcudia de Veo